100 casharro fiidiyow oo aad u xiiso badan oo loogu talagalay naqshadeeyayaasha (I) | Abuurista khadka tooska ah
Aniga oo ka faa'iideysaneyna xaqiiqda ah in aan aad uga dhaafnay 500 oo macaamiil barta Youtube-ka iyo waliba tiro ka badan 100 casharro fiidiyow ah oo ku saabsan codsiyada kala duwan ee naqshadeynta (gaar ahaan Adobe Photoshop), waxaan rabaa inaan idinla wadaago isku duubnaanta 100 fiidyow oo laga sameeyay Creativos Online halkaas oo layliyo aad u xiiso badan la soo jeediyay si loo horumariyo loona kobciyo barashadeena.
Bal eeg oo horay u soco oo nala tababar. Iyo hadaadan horey uhelin ¡Ku soo biir channelkeena!
Jill Greenberg waa fanaanad Canadian ah oo si caalami ah loogu aqoonsaday shaqadeeda fanka. Wuxuu ka soo shaqeeyay ololeyaal xayaysiis oo shirkadaha sida Dreamworks, Microsoft, MTV ama Coca-Cola. Waa fannaan la aqoonsan yahay, mid ka mid ah sawir qaadayaasha ugu saameynta badnaa waqtiyadan dambe. Maanta, waxaan u hibeyn doonnaa cajaladdan fiidiyowga ah Jill Greenberg Technique.
Waa saameyn iftiin leh, maahan tafatirka dhijitaalka ah, in kasta oo haddii aynaan lahayn nalalka saxda ah ama qalabka, Photoshop ayaa naga caawin kara si dhammaystiran.
Si aad ugu shaqeyso farsamadan, waxaan kuu keenay tan fudud Photoshop CC video Tutorial.
Timo jarista timaha marwalba waxay ahayd dhibaatooyin markii aan kudareyno astaamaheena halabuurkeena. Gaar ahaan markaan la shaqeyno muuqaal dhedig ah oo timo badan, tani waxay noqon kartaa caqabad. Fursadaha ayaa kala duwan oo qaar badan oo iyaga ka mid ah aad bay u shaqeeyaan, laakiin talooyinkan fiidiyowga ah waxaan awoodi doonnaa inaan wajahno hawshan qaab fudud, fudud oo leh muuqaal gebi ahaanba xirfad leh.
Qoraalka qoraalka ee halabuurkeennu wuxuu noqon karaa hawl aad u fudud haddii aan ogaanno sida loo barto qalabka burushka iyo miirayaasha Adobe Photoshop. Fiidiyowgan yar waxaan ku bari doonaa sida loo abuuro Isku-dhafka oo leh saameyn biyo-biyood sawirro ah. Waa la doorbidaa kahor intaanan bilaabin ka shaqaynta curinta qaabkan, waxaan eegeynaa shaqooyinka kale, rinjiyeynta ama xitaa curinta qaabka Pop-Art.
Haddii aan ka shaqeyneyno jilayaasha qaabka ama qaabeynta, waa suurtagal in aan u adeegsanno saameynta khiyaaliga ah ee habka astaamaha. Sidaa darteed, fiidiyowgaan waxaan kuugu keenayaa saddex saameyn oo gaar ah iyo qaab fantastik ah in lala shaqeeyo. Way fududahay runtiina waxay na siin karaan natiijooyin aad u wanaagsan. Waxaan ku shaqeyn doonnaa aagga ugu muujinta badan wajiga: Indhaha.
Fiidiyowga soo socda waxaan ku arki doonaa sida loogu abuuro qaab aad u fudud kan isku dhafan saamaynta biyo-biyoodka sawir leh taabasho aad u xiiso badan. Waxaan sidoo kale kuu keenayaa xirmada buraashka ee aan ugu shaqeyn jiray halabuurkan. Waxaad uga soo dejisan kartaa bilaash barta xiriirka soo socda (https://drive.google.com/file/d/0B7auI2v6-vbtR2VEMy1TWGdWUTg/edit?usp=sharing).
Mid ka mid ah qaybaha ugu muhiimsan ee sawirku waa iftiin iyo markaan ku dhexjirno mowjadda waxaan beddeleynaa cunsurkan waa inaan aad u taxaddarno maxaa yeelay tani waxay noqon kartaa tilmaame haddii sawirkeennu yahay mid macquul ah iyo in kale. Marka xigta waxaan arki doonaa sida loo abuuro hooska dhabta ah ee astaamaheenna qaab fudud oo macquul ah oo leh Adobe Photoshop.
Xal aad ufiican oo lagu siinayo riwaayado dheeri ah iyo muujinta muuqaalladeenna ayaa ah Saamaynta Dragan Waxaa lagu gartaa iyadoo la siinayo sawirrada darajo aad u hooseysa oo ah dhereg iyo calaamadeynta xariiqyo muujinta, laalaabidda iyo ku ciyaarista fiiqnaanta.
Tani waa farsamo aad u fudud in lagu daro mashaariicdeena saameynta iftiinka qaab falaadhaha cadceedda ah. Waxaa jira noocyo kala duwan, fidinno iyo habab naga caawin doona inaan helno saameyntan (waxaa suuragal ah inaan ku aragno fiidiyowyada mustaqbalka) laakiin waxaan jeclaan lahaa inaan ku bilaabo farsamadan, maadaama aan ogahay in badan oo idinka mid ah ay bilaabayaan oo ay qaadanayaan tallaabooyinkaaga ugu horreeya arjiga.
Tani waa hab aad u fudud oo la codsado qurxinta dhijitaalka ah jilayaashayada iyada oo loo marayo barnaamijka Adobe Photoshop. Nidaamka waxaa lagu soo saaray iyada oo loo marayo aaladaha aasaasiga ah iyo xulashooyinka sidaa darteed wax dhibaato ah kuma lahaan doontid inaad codsato haddii aad tahay isticmaale bilow ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » Photoshop » 100 casharro fiidiyow oo aad u xiiso badan oo loogu talagalay naqshadeeyayaasha (I)
Buugag bilaash ah oo loogu talagalay Adobe Dreamweaver CS3, CS4, CS5, CS6 iyo CC oo Isbaanish ah